खेल काउन्टर-हडताल: विश्व आपत्तिजनक लगे, एक सीएस रूपमा गेमिङ वातावरणमा ज्ञात: रिलीज धेरै प्रशंसक जित्यो देखि GO। संसारभरिका लाखौं मानिसहरू खोजे र उच्च बाँध्न कमाउन र खेल केही सफलता हासिल गर्न अहिले खोजी जारी छ। यो त उचित उपकरण बिना सजिलो बनाउन। काउन्टर-हडताल मा हतियार र हतियार, र के उपकरण को मूल्य हाल सञ्चालन गरिएको छ किन्न खर्च गर्न तपाईं कत्तिको आवश्यक?
के सूची को लागत निर्धारण
सूची सीएस को लागत: केही अवस्थामा GO तपाईं खेल स्थापित भएको कम्प्युटर मात्र मूल्य अधिक एक सभ्य राशि छ, तर सबै सम्पत्ति खेल चरणको को सामान्य लागत मा। मूल्यहरु को गठन मा विकासकर्ता गाइड के हो? को हतियार र यसको उपस्थिति को महत्वपूर्ण विशेषताहरु हुन्। यसबाहेक, क्षमता क्लिप रूपमा खाता जस्तै कारक, RECHARGE दर, गुणस्तर वस्तुहरू मा लिइएको (थकित, कठोर, परीक्षण र अनुसन्धान। एच) अनि अतिरिक्त बोनस (गति कमी अस्थाइ बन्दि-लिनुभएको उदाहरणका लागि,)।
मा खेल स्टोर वा विशेष स्रोतहरू मा उपकरण को वस्तुहरू र हतियार धेरै महंगा हुन सक्छ। मूल्य सूची सीएस: जाओ एक राइफल, एक चक्कु वा हतियार को उपस्थिति, कि छ, बासस्थान निर्धारण गरिन्छ। लागि AWP «Azimov», ड्रागन Lore र स्लिभ लोकप्रिय, र यसैले महंगा खाल। कहिलेकाहीं धेरै हजार डलर सम्म, यी शैलीहरू बनेको, जानुहोस्: खेल मा प्राप्त मौका सूची सीएस लागत यति धेरै सानो छ।
सीएस मा सस्ता स्टक: GO
खेल एक शक्तिशाली हतियार कम लागत राम्रो छ, तर एकै समयमा सिक्न साईट खेलाडीहरूलाई। सूची सीएस को लागत: यो श्रेणी मा जानुहोस् सामान्यतया खेलाडीहरू वास्तविक पैसा को खेल मा लगानी गर्न नहीं हुनेछ, in-खेल मुद्रा द्वारा कवर छन्। त्यसैले, हामी सस्ता उपकरण प्रतिनिधित्व:
एक शरीर र टाउको Kevlar, Kevlar + हेलमेट, उद्धार किट, Defusal किट मा हतियार (1000 मा 400);
Glock-18, pistols P2000, P250 र स्वतः CZ75 मरुभूमि ईगल (700 300);
submachine बन्दुक सांसद-9, सांसद-7 र म्याक-10 (175, 1250 र 1700 क्रमशः)।
अलिकति अधिक महंगा खेलाडी आक्रमण र sniper राइफल्स खर्च हुनेछ। सूची सीएस को लागत: 1500-1700 मा खेल मुद्रा देखि सामान सुरु यस समूहमा जानुहोस्। तिनीहरूले कम से कम महंगी sniper 08 आक्रमण राइफल्स एके-47 र Galil AR SSG लागि राइफल छन्। एक सानो रकम एक दारिम को खरीद आवश्यक हुनेछ।
को सीएस सबैभन्दा महंगा वस्तुहरु: GO
जो उपकरण खेल सीएस मा: GO खर्च हुनेछ खेलाडीहरू अविश्वसनीय महंगा छन्? निस्सन्देह, एक महंगा विषयहरू मुख्यतया हतियार सुदृढ भित्र पस्नु गर्ने क्षमता ती समावेश छ, स्थापना समय विस्फोटक उपकरणहरू वा आफ्नो neutralization र टी कम। डी यो sniper, निशान-20 र G3SG1 राइफल्स मान जो मा खेल मुद्रा बारेमा 5- छ 7000।
रूपमा अनौठो यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, तर सबैभन्दा महंगा उपकरणहरू सीएस: एक सर्प-छाला, को flames संग, र जस्तै: GO मात्र मूल रंग छ। को जित्यो युद्धमा लागि इनाम जस्ता हतियार प्राप्त मौका धेरै खेलाडीहरू वास्तविक मुद्रा को लागि खाल किन्न रुचि भनेर सानो छ। यस मामला मा, खेल चरणको आफ्नो राइफल 2,000 भन्दा बढी अमेरिकी डलर एक सुन्दर बाहिरी डिजाइन भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।
Donatien वा छैन: कसरी महंगा उपकरण प्राप्त गर्न?
धेरै तरिकामा महंगा हतियार वा छाला प्राप्त गर्नुहोस्। अक्सर लडाई खेल लडाई मा भाग लिन र सकेसम्म लामो: तिनीहरूलाई को एक बिल्कुल निःशुल्क छ। तर मिलान को अन्त मा यो सूची प्राप्त मौका पनि कम छ भन्ने तथ्यलाई मात्र 0.2-0.5%। धेरै मानिसहरू प्रति शेयर $2को एक लागत मा हतियार बक्से खरीद गर्न Resort रुचि किन छ। हामी हरेक दुई सय बक्समा मार्फत कि दुर्लभ खाल, चक्कु र राइफल बिर्सनु हुँदैन। दुर्लभ उपकरण प्राप्त गर्न सजिलो र यसरी महंगा तरिका - यो विशेष स्रोतहरू मा किन्न। यस मामला मा, खेलाडीहरूलाई एउटा वस्तु कम्तिमा $ 500 को लागि भुक्तानी गर्न हुनेछ।
धेरै साईट खेलाडीहरूलाई हत्यारा वा एउटा सुन्दर हतियार प्राप्त गर्न वास्तविक जीवनमा पैसा कमाएका वा छैन खेल लगानी गर्न बारेमा आश्चर्य गर्न सक्नुहुन्छ। शायद खेल्न अलिकति बढी समय संग, एक सभ्य प्रतिहरू संकलन गर्न एक मौका छ? वा सबै शङ्का छोड्न र बस आफ्नो मनपर्ने राइफल, भन्नु, $ 1,500 किन्न? निस्सन्देह, यो हतियार वा खाल खरीद स्वैच्छिक छ। जाओ लगभग $ 44.000 राशि: उदाहरणका लागि, एक Finn कारण सीएस यसको सूची को मूल्य भन्ने तथ्यलाई गर्न संसारभरि थाह छ।
Sims 4: प्लेयर समीक्षा र आलोचकहरु, कोड
कसरी आफ्नो खुट्टा स्लिम बनाउने? सिद्ध आंकडा लागि अभ्यास
को खाजा रक्सी?
अक्षय र गैर-अक्षय स्रोतहरू - दिगो प्रयोग। प्राकृतिक संसाधन विभाग
घरेलु पनिर र फल मिठाई। फल मिठाईहरू